SAMOTALIS: Somaliland:Wiil Aabihii Ahaa Ingiriis oo Taageero ka Dalbaday Dawladda Britain
Somaliland:Wiil Aabihii Ahaa Ingiriis oo Taageero ka Dalbaday Dawladda Britain
HARGEYSA (Somaliland.Org)- Nimcaan Bowden oo ah wiil dhalinyaro ah oo Aabihii ka soo jeedo Ingiriiska ayaa ka codsaday inay gacan u soo fidiso dawladda Ingiriiska.
- “Brian Bowden oo ku dhashay Dartmouth sannadkii 1928, waxa uu ka soo tegay Britain 1958, si uu uga shaqeeyo wakaaladdii biyaha Hargeysa, Somaliland ka dibna waxa uu halkaa ku guursaday haweenay Soomaali ah.
- Bilawgii sannadkii 1991, markii la afgembiyay Maxamed Siyaad Barre, waxa uu Mr Bowden ka shaqeynayay saafaraddii Ingiriiska ku lahaa Muqdisho, Soomaaliya.
- Ian McClunay, oo xilligaa ahaa Ambassador waxa daadgureeyay Ameerikaanka isaga iyo shaqaalihii kale ee safaaradda lixdii Jenaweri 1991-kii.
- Hase yeeshee Mr Bowden isagu halkii ayuu ku hadhay si uu u ilaaliyo qoyskiisii, iyada oo ay hareerahooda ka socdeen dagaal sokeeye oo uu dhiig qulqulayo.
- Email ay qortay jariiradani ayaa Nimcaan Bowden oo ku jirey da’dii labaataneeyaha oo ku nool kaam ku yaal Hargeysa, waxa uu yidhi “Aabahay waxa uu ahaa muwaadin Ingiriis ah, kii ugu dambeeyay ee ka shaqeynayay Safaaraddii Ingiriiska ee Muqdisho bilawgii 1991, markii ay Soomaaliya ku dhacday qaska iyo qalalaasaha ee ay burburtay dawladdii dhexe.”
- Waxa uu intaa ku daray ka dib markii ay dawladdii Ingiriis joojisay mushaharkii shaqaalaha in Aabihii oo aad binu’aadamnimada ugu dheeraa inuu lacag soo amaahday si uu ugu bixiyo mushaharooyinka. Ka dibna ay budhcad halkaasi ka soo raacday ay dhaceen, dileena.
- Nimcaan waxa uu sheegay markii la dilay Aabihii inay qoyskii ku soo laabteen Hargeysa, balse ay walaalkiisii weynaana ku waayeen fowdadii Muqdisho. Waxaanu intaa raaciyay “Hooyaday Ruun Aw Daahir Maxamed, iyana waxa ay dhimatay 1994, ka dibna waxa aan waajahay waqti adag iyo nolol kakan; “waxa aan ka mid noqday ciyaalka ku dayacan jidadka dooxa Hargeysa ee ku nool lafaw dhagax, waxaan noqday kabo baalasheeye.
Labels: HUMANITARIAN, NEWS, SOCIETY, Somaliland, WESTERN WORLD